I-Crater Lake "iBunkhouse" kwifama yeehektare ezili-100 kunye neendlela
IRantshi yabucala "iBunkhouse" ihleli ethafeni kufutshane neepaddocks zamahashe kunye ne barn w / iimbono zentlambo, iintaba, kunye nokufikelela kwiindlela ezintle zokunyuka ngamaplanga.
"I-Bunkhouse" igcina i-rustic charm ye-Bunkhouse yasekuqaleni kodwa ngaphakathi iyonwabela intuthuzelo entsha, isimbo kunye nezinto eziluncedo!
Yistudiyo esikhulu esahlaziyiweyo (20X40) evulekileyo/ibhedi ew/ikhitshi kunye nebhafu yabucala (ishawari ye-clawfoot/ibhafu). Ibhedi elingana nokumkani & nebhedi eyongezelelweyo yamawele ukuba unesithathu sokuhamba nawe, zonke kwigumbi elinye. Kwakhona, iTV kunye neWiFi
Ifama yethu ikwiimayile ezi-2 1/2 (entshona) ngaphandle kwedolophu encinci yaseProspect, kufutshane noMlambo i-Rogue, i-Lost Creek Lake, kunye neemayile ezimbalwa ukusuka kwi-Barr Creek entle, iMill Creek kunye ne-Pearsony Falls, kunye neekhilomitha ezingama-28 ukuya. iCrater Lake National Park ekungeneni ezantsi. Ikwicala elihle lobuhle beCrater Lake National Park ecaleni kweRogue-Umpqua Scenic Byway.
IBunkhouse yindawo ezolileyo kwaye epholileyo yokubuyela emva kosuku lokuzonwabisa lwaseMazantsi eOregon. Ifanelekile kwi-solos, izibini okanye kunye neyodwa.
Kwakhona kwifama kukho ishedi yamahashe, ikhaya labanini, indlu erentwayo ngeholide, kunye nezakhiwo ezingaphandle, amachibi ama-2 amakhulu, kunye neendlela ezininzi (iihektare ezili-100 kunye) zokuphonononga kunye nezilwanyana zasendle ukuze zibonwe.
4.96 out of 5 stars from 442 reviews
4.96 · Izimvo eziyi-442
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi442
Akukho bamelwane emehlweni. Uza kuba nekhabhathi yabucala kodwa wabelane nathi ngepropathi, amahashe, inja enye, ixhama, ielk, iimpungutye, izikhova, amadada, amarhanisi, kunye nenye irenti yeendwendwe ezikufutshane (ezantsi kancinane kwindlela yokungena nangasemva kweBunkHouse ).
Idolophu encinci ekufutshane yeProspect inePizza Parlour, isikhululo segesi, iposi, ithala leencwadi, iHotele eyimbali, iCafe yeProspect, kunye nemarike yelizwe elincinci -Intengiso yeProspect, kunye neB&D's Deli. IProspect ikwaqhayisa ngeengxangxasi ezintathu ezintle. Yaziwa ngokuhamba entlango kunye nokuloba kuMlambo iRogue. Lost Creek Lake yimizuzu eli-10 ngasentshona.
Phezulu kuHola weNdlela, malunga neekhilomitha ezili-12, yi-Beckies Cafe (ukupheka kwelizwe elihle kunye neepayi zamaqunube zasekhaya). Yeyona ndawo ifanelekileyo yokumisa isidlo sakusasa, sasemini, okanye isidlo sangokuhlwa endleleni kwaye ubuya usuka kwi-Crater Lake National Park.
Sihlala kwifama kwaye siyafumaneka ukunika iindwendwe zethu ulwazi, izalathiso zendawo, kunye nokunceda ukwenza ukuhlala kwakho kube yeyona ndawo ifanelekileyo yokubalekela. Usenokungasiboni okanye ungasiboni ngaphandle kokuba ufuna into ethile okanye uhlanganyele nathi eshedini ngexesha lokutya. Siyayihlonela imfihlo.
Siyixhalabele kakhulu i-Covid 19 kwaye silandela iprotocol ngokwasentlalweni kunye nokucoca kunye nokucoca.
Injongo yethu kukwabelana ngesi siqwenga sihle sendalo nabanye abanokuyonwabela ngokupheleleyo kwaye babe namava akhululekileyo nanoxolo njengoko behlola umzantsi weOregon.
Sihlala kwifama kwaye siyafumaneka ukunika iindwendwe zethu ulwazi, izalathiso zendawo, kunye nokunceda ukwenza ukuhlala kwakho kube yeyona ndawo ifanelekileyo yokubalekela. Usenok…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Prospect